श्रीमती मा’रे’र फाले, आफैले भाईलाई फोन गरेर सोधे ‘पनौतीमा के भएको हो ?’ – Sidha Kura
मुख्य पृष्ठ /समाचार/श्रीमती मा’रे’र फाले, आफैले भाईलाई फोन गरेर सोधे ‘पनौतीमा के भएको हो ?’
काठमाडौ । सामान्य विवादकै कारण ५३ वर्षको उमेरमा एक पुरुषले श्रीमतीको ज्या’न लि’ए’का छन् । श्रीमतीले ठूलो रकम ऋण लिएको थाहा पाएपछि उनीहरुबीच विवाद सुरु भएको थियो । बाराका जीवन नेपालीले ४३ वर्षकी श्रीमती सीताको ज्या’न लि’ए’का हुन् ।,,,भिडियो हेर्न तला क्लिक गर्नुहोला,,,
केही समय अघि सम्म उनीहरुको जीवन राम्रो चलेको थियो तर जीवनले थाहा पाए की सीताले गत साउनमा गाउँकै एक जनासँग ३३ लाख ४० हजार रुपैयाँ ऋण लिएकी थिइन् । यो रकम उनले किन लिइन् र कहिले कहिले लिइन् भन्ने कुरा थाहा नपाएपछि जीवन र उनीबीच विवाद सुरु भएको हो ।पुस ९ गते बिहान पौने ११ बजे एकजना महिलाको शव स्थानियले फेला पारेपछि प्रहरीले सो घटनाको अनुसन्धान सुरु गरेको थियो । महिलासंग भएको एक कागजमा उनका पति र देवरको मोवाइल नम्बर र नाम थियो । त्यसैको आधारमा प्रहरीले देवर राजेन्द्र र उनका पतिलाई पनि फोन गरेको थियो ।
प्रहरीले फोन गरेर सीताको बारेमा सोधेपछि जीवनले थाहा नपाएजस्तै गरे । उल्टै गत शनिबार जीवनले भाइ राजेन्द्रलाई फोन गरेर सोधे, ‘पनौतीमा के घटना भएको हो रु ’यता प्रहरीले भने जीवननै घटनामा संलग्न भन्ने कुराको पत्ता लगाइसकेको थियो । मंसिर २३ गते पनौतीबाट ५३ वर्षीय जीवनसँगै बारास्थित घरतिर लागेकी ४३ वर्षीया सीताको बाटैमा ज्यान गएको थियो ।
गाडी चढेको १० मिनेटमै उनीहरुबीच विवाद बढेपछि बाटैमा गाडीवाट झरेका थिए । इलाका प्रहरी कार्यालय बनेपाका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक योगेन्द्र तिमल्सिनाका अनुसार रातको ९ बजे जीवनले घटना गराएर श’व फा’ले’र हिँडे । आफू भने अर्को गाडीमा चढेर भोलिपल्ट बिहानै बाराको निजगढ नगरपालिका २ स्थित घर पुगे।प्रहरीले फोन गरेर बोलाएपछि घटनास्थल पुगेका देवरले भाउजुलाई चिने । देवरकै सहयोगमा सीताका श्रीमान पक्राउ परेका हुन् ।,,,भिडियो हेर्न तला क्लिक गर्नुहोला,,,
जन्ती जाँदा बेपत्ता भएका १४ वर्षीय बालक यस्तो अवस्तामा भेटिए !!!
युक्रेन प्रवेस गरेका ३५०० रुसी सैनिकको मृत्यु
कस्तो छ कोच दिपको अबस्था? शुशिलले दिए कोच दिपको बारे यस्तो जानकारी (यो हेर्नुस भिडियो)